अब अक्सिजन निर्यात - परिहास - नेपाल
हाम्रा प्रधानमन्त्री आइडियाका खानी । जुनसुकै अवस्थामा जहाँ पनि उनलाई ठाउँको ठाउँ आइडिया फुरिहाल्छ । हालैको कुरा हो– वातावरण दिवसमा रुख रोप्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले भने, “मलाई यौटा खतरा आइडिया फुर्‍या छ ।” उनले यसो मात्र के भनेका थिए, सब मास्कधारी जनताका कान ठाडा भए । सोचे, राजधानीको प्रदूषण हटाउने र यहाँका वासिन्दालाई सास फेर्न स्वच्छ हावा कोसेली दिने योजना सुनाउन लाग्या होला । तर, ओलीजीले भने, “अब रुख रोपेर यहाँको अक्सिजन मरूभूमितिर बेच्नुपर्छ ।” आहा ! आइडिया त खत्रै हो, सास फेर्न पनि सजिलो हुने, देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पनि पुग्ने । तर, रुख ठूलो हुने कहिले ? रुखले अक्सिजन उत्पादन गर्ने कहिले ? बेच्ने कहिले ? पैसा कमाउने कहिले ? यो त आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तो भएन र भन्या ?